तपाईंले दिएको मतको सदुपयोग भएन भने ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः मंसिर २३, २०७४ - साप्ताहिक
म कुनै दलसँग नजिक वा टाढा हुन चाहन्न । म सबैको कलाकार हुँ । मैले मतदाता परिचयपत्रसमेत बनाएको छैन । मैले मतदान गर्न पाए पो सदुपयोग वा दुरुपयोगको कुरा आउँछ ।
केदार घिमिरे माग्नेबूढा
के गर्नु र ? उही हो फेसबुकमा दुई–चार दिन रोइएला, अरू त के नै गर्न सकिन्छ र ?
मेरो निर्वाचन क्षेत्र विराटनगरमा पर्छ । यसपटकको चुनावमा भोट हाल्न जान पाइएन ।
अब पनि सदुपयोग भएन भने त जनताले त्यत्तिकै छाड्नेवाला छैनन् । म पनि त नेपाली जनता नै हुँ, बाँकी कुरा आफैं बुझ्नुहोस् ।
अलि दिन चिया पिउँदै गाली गर्छौं, अनि अर्कोपल्ट चुनाव आउँछ र फेरि उसैलाई भोट हाल्छौं । यस्तो प्रक्रिया मैले थाहा पाएकै २५ वर्ष भयो ।
निर्मल शर्मा, निर्माता/निर्देशक
मताधिकारको उपयोग गर्नु मेरो काम, पाएको मतको सदुपयोग गर्नु–नगर्नु उसको काम । सदुपयोग गरे अर्को पटक पनि चुनाव जित्छ, नगरे बदनाम हुन्छ र अर्को पटक भारी मतान्तरले हार्छ ।
गर्न के नै सकिन्छ र ? फेसबुकमा भडास पोख्छु ।
फटाहाहरूको बीचबाट एक जना कम फटाहा रोज्नु छ । त्यसैले जसले जिते पनि केही हुनेवाला छैन । त्यसैले मैले आफ्नो मत खेर जान्छ भन्ने बुझेरै मत नहाल्ने निधो गरे ।
किरण लाकौल, अभिनेता
मतको सदुपयोग नभए निरन्तर खबरदारी गर्नेछु । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुने हुनाले जनप्रतिनिधिद्वारा हामी जनताको मतको सदुपयोग नभएको खण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि आवाज उठाइन्छ ।
पूजा तिमिल्सिना, विद्यार्थी
एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले मताधिकारको उपयोग गर्दै मत खसाल्न त जानुपर्ने हो, तर त्यसको सदुपयोग हुँदैन भन्ने कुरा मनमा गढेको छ, त्यसैले म घाम तापेर बसें, मत खसाल्न गइनँ ।
बिनु खड्का, रेडियोकर्मी
अर्को पटक पनि त पालो आउँछ । त्यतिबेला त्यो उम्मेदवारलाई फर्केर पनि हेरिँदैन । मैले त के गर्नु समयले नै उसलाई सजाय दिन्छ ।
एनी कुँवर, अभिनेत्री
खै, अहिलेसम्म के भएको थियो र अब पनि होला भनेर आस गर्ने ? आस गरौं, भर नपरौं ।
सदुपयोग होस् भनेर निरन्तर दबाब दिइरहिन्छ ।
राम पाण्डे, सञ्चारकर्मी
के गर्नु नि, बेकारको हालिएछ भनेर आफैंलाई धिक्कार्दै बस्छु ।
जित र हारका आधारमा त मेरो मतको सदुपयोग नै हुन्छ भन्ने लाग्छ, तर जितेर पनि उम्मेदवारले जनहितमा केही गरेनन् भने मतको दुरुपयोग भए बराबर नै हो । मत दुरुपयोग भयो भने आफ्नै नियतिलाई धिक्कार्नुबाहेक अरू के नै गर्न सकिन्छ र ?
मणि लोहनी, कवि/पत्रकार
उनीहरू पदमा पुगिहाल्छन् अनि हामीले के नै गर्न सक्छौं र ? हामी जनताको सुन्ने नै को छ ? त्यसैले उनीहरूलाई सराप्दै आ–आफ्नै कामतिर लागिन्छ ।
अर्को पटक उसलाई मत दिइँदैन ।
आफैंलाई गाली ।
सही उम्मेदवारलाई चिनेर मत दिइएको खण्डमा मतको सदुपयोग गर्नु बाहेक नेताहरूसँग अरु उपाय छ जस्तो लाग्दैन ।
किस्मत पाण्डे, व्यवसायी
मैले मत दिएको उम्मेदवारले हारे अर्को पाँच वर्ष मतदाताको मन जित्ने गरी काम गर्नुस् भन्छु, जिते वाचा पूरा गर्नुस् भनेर दबाब दिन्छु । पाँच वर्षसम्म भेटेर, फोन, म्यासेज तथा सामाजिक सन्जालबाट खबरदारी अनि किचकिच गरेर दिमाग खराब गर्दिन्छु ।
खानामा झिँगा पर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ?